ज्ञानेन्द्रको जस्तो व्यवहार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई गगनको चेतावनी
काठमाडौं,२५ असार । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले विगतमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनकारीसँग गरेजस्तो व्यवहार नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् । उलने तत्कालिन राजाले रत्नपार्कमा आन्दोलनकारीको संख्या हेरेर गरेको व्यवहारजस्तो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले एक दुई जना व्यक्तिको स्वार्थको विषय नहेर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने नेता थापाको भनाई थियो।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. गोविन्द केसीको अनशनको विषयमा संसदमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले आन्दोलनकारीको संख्या र संसदमा टाउको गनेर कसैको आवाज नदबाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।
‘सत्यको पक्षमा फगत एक जना भए पनि पुग्छ । आज गोविन्द केसी सत्यको पक्षमा उभिनु्भएको छ । मान्छे कति छन् नगन्नुस्, कति टाउको छ नहेर्नुस्, सदनको टाउको पनि नगन्नुस्’ उनले भने ‘म प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।’
सांसद थापाले डा. गोविन्द केसीलाई चिन्न पनि आग्रह गरे । कुनै स्वार्थ र झण्डा उनीसँग नभएको भन्दै थापाले चिकित्सा शिक्षा सुधारको नशामात्र उहाँसँग रहेको बताए । ‘उहाँलाई चिन्नुस्, उहाँसँग कुनै झण्डा छैन । लोभ छैन, स्वार्थ छैन । केवल नशा छ, नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र सुधार्ने नशा छ । त्यो नशा कसैले नजर अन्दाज गरेर उत्रिदैन । कसैले तर्साएर पनि उत्रँदैन ।’
२०७५ असार २५ सोमबार १५:४६:०० मा प्रकाशित
प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताबीच मुठभेट
भोजपुर । टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–१ तिम्माको धोद्रे जङ्गलमा प्रहरी र नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) समूहका कार्यकर्ताबीच मुठभेट भएको छ ।
काँग्रेसको छाँयाँ सरकारमा गृह बडु, अर्थ मिनेन्द्र र शिक्षामा गगन मन्त्री (नामावली सहित)
कामाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले छाँयाँ सरकार गठन गरेको छ । सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा निगरानी गर्न भनी समन्वय समिति नाम दिईएको
नेकपाका अध्यक्षहरु नै सिध्दान्तका दुइ किनारमा
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अझै सैध्दान्तिक रुपमा एक नभैसकेको कुरा उनीहरुले नै
बहुदलीय जनवाद र नयाँ जनवादको सश्लेषण गर्नुपर्छ: ‘प्रचण्ड’
काठमाडौँ, ३ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताको बहुदलीय जनवाद र २१ औँ शताब्दीको जनवादलाई नयाँ सश्लेषण गरी